Maung Yit – No Government in USA and also in Burma too !!!! | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း ရွှေဗိုလ် ● လောင်စာလာပို့တယ် ...
Maung Yit – No Government in USA and also in Burma too !!!!
ကာတွန်းမောင်ရစ် – ဒီတခါတော့ အမေရိကန်နဲ့ ဗမာပြည် တူသွားဘီ၊ ၂ နိုင်ငံစလုံးမှာ အစုိုးရ မရှိဘူး …
အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၃